Resaky ny mpitsimpona akotry : rivodrivotra an-Kadilàlana (NewsMada) | AEMW
Resaky ny mpitsimpona akotry : rivodrivotra an-Kadilàlana (NewsMada)
Maiva-mavesatra ny rivotra fifohana eto amin’ny fiarahamonina. Tsy hita ho lazaina hoe mikatso, ny fiazakazahana toy ny isan’andro samy lany fotoana eo amin’ny famonjivonjena ny atsy sy ny ary, ny vesatry ny fahasahiranana tsy misy fitsaharana. Na izany aza tsapa ihany fa ny fisin’ilay rahona mandondona eo amin’ny tontolo pôlitika, rahona izay na mody tsy jerena aza dia tsapa fa manaloka ny ampitson’ny rehetra. Maizina arak’izany ny vodilanitra. Dia hiandry fotsiny kotro-baratra sy fifofon’ny tadio mahery ve ? Ionona fotsiny amin’ny fiomanana hizakana fandalovan-drivodoza indray ve ?
Raha ny fijerevana azy moa dia efa nilentika lalina ny antony mampisara-bazana ka manasarotra ny fiheverana fa ho moramora ny famahana ny olana. Tsy tokana koa moa ny antony niteraka disadisa fa maro karazana ny sehatra nipoiran’ny tsy fitovian-kevitra izay nampiitatra ny fisarasarahana mifamatopatotra sy mifampitohitohy toy izao.
Tsy hoe amelon-dakolosy eto amin’ny fiangonana misy ny tena, fa araky ny fijery azy dia eo amin’ny fiaraha-midinika an’ilay Lalàna mifehy ny serasera no ahafahana ahita irika kely entina anazava ny vodilanitra. Tsy mibahan-toerana irery akory iny lalàna iny, ary tsy mahavaha ny olana sasany. Fa ny fampisehona fahavonona ifandinika mikasika an’iny lalàna iny dia mitory fahavonona amin’ny fiaraha-miaraka hitady vahaolana.
Raha misy anie ny tsy fitovizan-kevitra dia ao ny lafiny roa farafaharatsiny, na ny an-daniny na ny an-kilany dia samy miseho tompon’ny marina avokoa na samy mahafantatra aza fa ao ambadiky ny marina dia misy tetika miafina. Raha hifanatona izany dia ho ahiahiana ve fa samy hanao kibay an-kelika avokoa ? Tsy mahavaha olana firy raha samy mitazona an’izay toe-tsaina izay. Fomba fiteny mivantana ihany no hany amakina ny vay, tsy hisorona na hifanampim-bava ny antony ihaonana. Ilay ady hevitra anefa dia mikasika indrindra fanampenam-bava. Amin’izany ve ny olana ? Tsy vitan’ny amin’izany fotsiny fa izany mihitsy no tena votoatin’
ny olana. Ny fahasahiana ifanatrika no làlana ahitana na ny hoe tsy tena marina aza, sitrany ahay fanamaivanana ny rivotra eto amin’ny fiaraha-monina, izay mitsaoka an’izany no tanalahy.
← Us et coutumes : faites ce que je dis, ne faites pas comme moi (NewsMada)
Albert Rabearifeno : « La philosophie malgache est la meilleure au monde » (NewsMada) →